सोलुखुम्बुको माहाकुलुङ्ग गाउपालिका अन्तरगत भुकम्पले धोस्त भएको भवन स्थानिय समाजसेबि तथा लामो समय नेपालको पर्यटन क्षेत्र मा काम गर्दै अाउनु भएका गंगा खड्काले छ कोठे पक्की भवन निर्माण गरीदिनु भएको छ २०७० सालको बिनासकारी भुकम्पले उक्त् भवन बस्न नमिले पछि टहरा मा पठनपाठन सञ्चालन गरीदै अाएको बताइका छन अहिले सरकार ले चारकोठे भवन गरीदिएको छ
भुकम्प पिडित ले घर निर्माण गरीसके पछि मापदण्ड नखोजी अनुदान उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जिम्मेवारीको कामलाई कुनै पनि बहानाको आड नलिइ तिव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण परामर्श समितीको बैठकलाई आज बालुवाटारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणको कामको प्रगतिसँग आफु सन्तुष्ट नरहेको बताउनुभएको छ । “निर्माणको काम धिमा गतिमा भयो” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “यसलाई गति दिनुपर्छ ।” कतिपय
बिश्वका सबै मुलुक देखी सगरमाथाको फेदि सम्मन अमेजमान कम्पनि नेपाल भित्रिने पर्यटनका लागी अनुकुल
कसरी अमेजमान ग्रपअफ कम्पनिमा अाफ्ना होटेल हरू रजिस्टर गराउने तलको भिडियो हेरेर सजिलै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंगापुरमा हेड अफिस रहेको, बैँककमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय कार्यालय भई नेपालमा सार्क स्तरीय क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको अमेजमान ग्रुप अफ कम्पनीलाई Send CV to : hr@amejman.com Amejman.com; Complete Hotel Booking System Register for free your Properties:http://join.amejman.comमेजमान ग्रुप
फेरि झुक्यायो मेलम्चीले काठमाडौँबासीलाई ढलमा परिणत
काठमाडौं, २० फागुन । मेलम्ची आयोजनाले फेरि एकपटक काठमाडौँ उपत्यकाबासीलाई झुक्याएको छ । नयाँ वर्षदेखि मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीले उपभोग गर्न पाउने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको आयोजनाले बैशाखमा पानी ल्याउन नसक्ने भएको हो । उसले अब अर्को भाका तोक्न बाँकी छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसी डी राभेन्नाँले काम नगर्दा समयमै
फाल्गुन १७, रमेश खड्का काठमाडौँ — शिक्षित हुनु भनेको के हो ? असल शिक्षाका लागि के पढ्ने/पढाउने भन्ने निर्णय कसले गर्ने ? शिक्षाका लागि कति मूल्य तिर्नुपर्छ ? यस्ता सवालको जवाफ त्यति सजिलो छैन । विगत तिन दशकमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अप्रत्यासित विकास भएका छन् । तर सामाजिक शिक्षाको क्षेत्रमा सोचनीय समस्या देखापरेका छन् । विशेषगरी जब आजको विश्वमा
करोडपति बने चौंरी गोठला कान्छा
मनाङ — नेपालका शहर होस् या ग्रामीण भेग सबैतिरका युवा विदेशिने लहर चले पनि मनाङका कान्छा गुरुङ भने चौँरी गोठमा रमाइरहेका छन् । युवा विदेशिने लहर चलेको बेला जोस जाँगरका साथ चौँरी गोठमा मनाङको नेस्यङ गाउँपालिका–६ का ३२ वर्षीय कान्छा गुरुङ । शुरुमा १० वटा चौँरीबाट शुरु गरेका गुरुङ अहिले करोडपति बनीसकेका छन् । तस्वीरः नवीन
एक नम्बर प्रदेश को नाम सगरमाथा हुनु पर्ने मा जोड के भन्छन मुक्य मन्त्रि राई
रमेश खड्का १४ फाल्गुण २०७४/काठमाडौं— प्रदेश १ को नाम के होला रु अहिले धेरैको बनेको छ । यही चासो विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त भइरहेका छन् । कतिपयले सार्वजनिक कार्यक्रममा सांसदहरूलाई सुझाव दिइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि धेरैले प्रदेशको नाम सुझाइरहेका छन् प्रादेशिक पहिचान, समुदायको पहिचान र समृद्धि झल्कने नाम राख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।
माघ २७, २०७४रमेश खड्का काठमाडौँ — विपन्न बाढीपीडितका लागि सन्तपुरमा एकीकृत नमुन्ना बस्ती निर्माण गरेका कलाकार दम्पती सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)–कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) बिहीबार ऋणको भारी बोकेर फर्केका छन्। बाढीपीडितलाई बस्ती निर्माण रौतहटको सन्तपुरमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले हस्तान्तरण गरेको एकीकृत नमुना बस्तीमा शुक्रबार देखिएको चहल पहल। चन्द्रपुर ८ सन्तपुरमा धुर्मस–सुन्तली फाउन्डेशनले हस्तान्तरण गरेको एकीकृत नमुना बस्तीनिर्माणका क्रममा गरेको ऋणमध्ये ६० लाख
माघ २५,रमेश खड्का , मनिला । एसियाली मुलुकहरुमा अहिले मनसुनी वर्षा जारी छ, र महिनौं लामो गर्मीबाट राहतको श्वास लिन सकिने अवस्था छ । तर के गर्नु, यो प्रचण्ड गर्मी फेरि दोहोरिनेछ र एसियाली सहरहरुमा असाध्यै भयावह स्थिति सिर्जना हुनेछ । हो, ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी इलाकामा गर्मीको अनुभव हुनेक्रम दुईगुणाले वृद्धि भइसकेको छ –